Yiba nomsebenzi kunokuba ungenzi
Mhlawumbi uvile eli bali: Abafundi abangamashumi amathathu balindele ukubhala uvavanyo lokugqibela lwenkcazo yefilosofi kwi-Theory of Knowledge. Unjingalwazi ungena kwigumbi, izandla ezithatha iibhokisi eziluhlaza, uthabathe isihlalo, uzibeka phezu kwetafile, athi, "Uya kubhala isicatshulwa esisodwa kulo mzekelo. iiyure. " Ngomzuzu omnye umfundi uvuka, uphendule kwincwadi yakhe yempendulo kwaye ahambe.
Inxalenye yekhoboka lekhoboka ngaphandle kweeyure ezimbini, ichaza ukusekwa kwezinto, ukuguqula izinto eziphathekayo, ukuthanda izinto eziphathekayo, iinjongo, kunye nezinye izinto abacinga ukuba zifanelekileyo. Kodwa xa iimviwo zibuyiselwa, isicatshulwa esisodwa sinokufumana i-A-enye iphendulwe ekuqaleni. Ofunda nabo abafundi abafumana i-A yemvelo bafuna ukubona intsingiselo yakhe. Uyabonisa. Iqukethe amagama amabini: "Sisiphi isihlalo?"
Ukuba unayo ifilosofi yokugqibela ekhuphuka, kwaye uziva unesibindi, ungazama isicwangciso esinjalo. Kodwa andinakukucebisa. Kukho amathuba okuba ngama-99.9% ehlabathini lenene, incoko yegama elibini lafumana i-fat fat F.
Ehlabathini lenene, into ebaluleke kakhulu ukuba uyikhumbule ukufundisisa ukuhlolwa kwindlela ekhutheleyo kunokuba yenzeke. Ithetha ntoni le nto? Ukufunda ngokukhawuleza apho ukhangele khona amanqaku akho eklasi, amanqaku athathwe kwiincwadi, iincwadana ezindala. Uphando lubonisile ukuba oku akusebenzi kakuhle.
Oku kunokwenene ngokukhethekileyo kwifilosofi kuba ukungabonakali kwezinto ezinokubakho kunokukwenza ukuba ukhumbule kunzima.
Ngoko unokwenza njani ukufunda kwakho kusebenze? Nazi iindlela ezine:
Bhala izicatshulwa zengqondo, ezikhethiweyo zixesha. Oku mhlawumbi kungumsebenzi omnye onokubaluleka ongayenza. Ukubhala phantsi kweemimiselo zexesha-mvavanyo kwaye akukho manqaku-kukunyanzela ukuba ulungise oko uyaziyo, kuqinisa amandla akho okukhumbula iinkcukacha (izichaso, iingxabano, ukuchaswa, njl.), Kwaye kaninzi ukhuthaza iingcamango zakho zangaphambili ukuba ungagqiba kuquka ukuba ubhala kwisihloko esifanayo kwisifundo. Uninzi ootitshala kufuneka bakwazi kwaye bazimisele ukukunika iisampuli imibuzo ongayisebenzisa kule njongo.
Funda ngeembono zokubhala iincwadana zentshukumo. Ngaphambi kokuba ubhale isicatshulwa, uzakufuna ukulungiselela ngokufunda izinto ezifanelekileyo. Kodwa ukwenza olu hlobo lokufunda, lunenjongo kunokuba lube ngcono kunokuba nje uhlole amaninzi amanqaku kunye neetekisi kwaye unethemba lokuba ezinye zazo ziyazinamathela.
Sebenzisa ixesha ukucinga ngemibono yakho ukubonisa amanqaku angabonakaliyo. Ngokomzekelo, ukuba ubhala malunga nendlela abasebenzisi base-utilitarian abanokuba bazimisele ngayo ukunikela ngamalungelo ngamnye ukuze kukhuthazwe ulonwabo olukhulu kwinani elikhulu, unokuba ucinge ngeqela leetom tape eziye zihlola wonke umntu kwisitya. Kulula kakhulu ukukhumbula izibonelo ezikhonkco ngaphandle kwemigaqo engabonakaliyo; kodwa xa uyenzayo, mhlawumbi uzakufumana kulula ukukhumbula i-point of theory imizekelo eyenziwa. Nabani na ofunda isicatshulwa banokukunika ikhredithi xa usebenzisa imizekelo yokuqala yokubonisa: ibonisa ukuba uyayiqonda into othetha ngayo kwaye ungayi kuphinda uphinde uphendule ngento engatshoyo ngomnye umntu.
Ziqhelise ukwenza iincwadana. Emva kokuba ubhale isicatshulwa somsebenzi kwaye unento epheleleyo engqondweni, qulunqa isicatshulwa kwisincoko osandula ukubhala, mhlawumbi kunye nokuphucula. Kwakhona, oku kuya kukunceda ukuhlela ukucinga kwakho kwaye kufuneka kukuncedise ukuphucula ikhono lakho lokukhumbula izinto ngexesha loviwo.
Iziseko ezisiseko zokulungiselela nayiphi na yokugqibela zifana kakhulu kuzo zonke izifundo: fumana ubuthongo obuhle; udle isidlo sasekuseni esihle (okanye sasemini) ukuze ubuchopho bakho buphephe; Qinisekisa ukuba une ipeni yokugcina. Abanye abantu bacinga ukuba kunceda ukulala kunye nencwadi yokufunda phantsi komsila wakho. Iingcali zithemba ngeli cwangciso, kodwa ngoku kungasebenzi akuzange kuqinisekiswe ngokucacileyo.
Iikhompyutheni ezingaphezulu kwi-intanethi
Inzululwazi: indlela efanelekileyo yokulungiselela iimviwo zokugqibela
Indlela yokufundela uvavanyo, imibuzo okanye uviwo
Indlela yokufunda isifundo sokugqibela kwikholejini
I-St. John's College yaseSanta Fe Admissions
Imiba yokukhupha isisu e-United States
Ukusebenzisa i-Sailboat Boom Vang kwi-Sailing
Iisiseko zokuSebenza kweDwala
I-8 ye-Poker Etiquette Rules
Usuku lweHarriet Tubman: ngoMatshi 10
Upelo lwesiYuda lwe "UThixo" njenge "Gd"
Isikhokelo soMqala kwi-Delphi Database Programming
UMorgan Corinthos (uBryan Craig) | Isibhedlele Isibhedlele
Funda ngeVon Thunen Model
Imfazwe Yehlabathi II: USS Missouri (BB-63)
Isiqhumiso somlilo saseBellane